Mpandresy amin'ny fifaninanana World of Warcraft: Tantara 3 | Fifaninanana | WoW Guides | WoW Guides
World of Warcraft: Mpandresy ny fifaninanana Tantara 3
World of Warcraft: Tonga eto ihany ny Tantara 3, misaotra an'i Mampihomehy Panini Manana kopia roa halefa amin'ny mpamaky izahay.
2 World of Warcraft an'ny fifaninanana: Tantara 3 - Mamoaka kopia 2 izahay
3 World of Warcraft: Tantara 3 fifaninanana
World of Warcraft an'ny fifaninanana: Tantara 3 - Mamoaka kopia 2 izahay
Misaotra Mampihomehy Panini afaka mahazo tanteraka ao español ity novela ity, misy fonony sarotra, Pejy 224 ary amidy amin'ny 28,50 € ao amin'ny Tranonkala ofisialin'ny tantara an-tsary Panini.
Ny ampahany fahatelo amin'ny World of Warcraft malaza eran-tany: eto i Chronicles. Ity boky ity dia manambara antsipiriany bebe kokoa momba ny tantara sy ny angano momba ny tontolon'ny lalao. Ahitana sanganasa vaovao miloko toy ireo Illustrator malaza toa an'i Peter Lee, Emily Chen ary Stanton Feng. Asa iray hahafaly ny mpankafy sy ny mpanangona rehetra.
Mizara telo ny andiany, izay efa misy amin'ny teny espaniola.
Ny volavola I dia manomboka amin'ny famoronana ny zava-drehetra. Mitantara tantara tsy mbola re momba ny fahaterahan'ny cosmos, ny fiakaran'ny fanjakana taloha, ary ny hery namolavola ny tontolon'i Azeroth sy ny mponina ao aminy.
Volume II dia manadihady ny niandohan'ny Draenor taloha sy ny mponina ao aminy, ny famoronana ny Horde voalohany, ary ny fananganana ny Dark Portal.
Ny Volume III dia mifantoka amin'ny hetsika izay nanamarika ny tantaran'ny Azeroth maoderina sy ny lasa an'i Arthas Menethil, Illidan Stormrage, Jaina Valiant, ary ireo olo-malaza hafa amin'ny World of Warcraft.
World of Warcraft: Tantara 3 fifaninanana
Azoko antoka fa maro aminareo no hanome zavatra hananana kopia an'ity boky ity, sa tsy izany? ary… Ahoana ny momba ny Retweet? Manamora tena ho anao izahay! Samy mandray anjara ny tsirairay!
World of Warcraft amin'ny fifaninanana: Tantara 3 - Mamoaka kopia 2 izahay - https://t.co/XynTDAWWFY pic.twitter.com/tOcB0W8sjc
- GuiaswoW (@GuiaswoW) Jolay 3, 2018
Tsy maintsy manaraka ny dingana roa alohan'ny hidirana amin'ny fanomezana ianao.
Ireo rehetra manaraka sy RT vita androany 3 ka hatramin'ny 13 Jolay tamin'ny 12 maraina (ora Espaniôla) dia manan-kery.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: WoW Guides » About us » fifaninanana » World of Warcraft: Mpandresy ny fifaninanana Tantara 3
ranomasina dia hoy izy:
Doneoooo, aleo hojerena raha misy vintana?
Valio ny ranomasina
Tsara vintana! ^^
Fiovana ho an'ny mpihaza marika amin'ny Battle for Azeroth
Ady ho an'ny torolàlana ho an'ny fahazoana aina mialoha an'i Azeroth